Khasaaraha Ka Dhashay Mudaharaadyadii Maanta Ka Dhacay Addis Ababa, Jimma, Adama iyo Ambo - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaKhasaaraha Ka Dhashay Mudaharaadyadii Maanta Ka Dhacay Addis Ababa, Jimma, Adama iyo Ambo
Khasaaraha Ka Dhashay Mudaharaadyadii Maanta Ka Dhacay Addis Ababa, Jimma, Adama iyo Ambo
Addis Ababa (JigjigaOnline) – Ciidamada Booliska ayaa xabbad nool iyo gaaska dadka kaga ilmaysiisa u adeegsaday kumannaan qof oo maanta ka mudaharaadayey sida loola dhaqmay Jawaar Mohamed.
In ka badan kun qof oo taageereyaal ah ayaa iskugu soo baxay bannaanka guriga uu Addis Ababa ka deggan yahay Jawaar Mohamed oo ka mid ahaa dadkii sannadkii hore abaabulay mudaharaadyadii uu kursiga ku yimid Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed.
Mudaharaadyadan ayaa bilaabmay subaxnimadii hore ee saaka, kaddib markii sida uu ku sheegay Jawaar ay gurigiisa isku xeereen ciidamo boolis ah, waxaana mudaharaadku uu kusii fiday magaalooyinka Adama, Ambo iyo Jimma.
Sida ay wararku sheegayaan, afar qof ayaa lagu toogtay magaalada Ambo, halka magaaalada Addis Ababa uu ugu yaraan hal qof ugu geeriyooday xabbad haleeshay, in ka badan 20 dhallinyaro ahna lagu xidhay.
Sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters, magaalada Adama oo 90 KM Koonfur-bari ka xigta caasimadda Addis Ababa waxa lagu toogtay laba qof, laakiin wali ma cadda cidda xabadda riday.
Ambo oo iyaduna 100 km u jirta Addis Ababa, ciidamada booliska ayaa gaasta daddka kaga ilmaysiisa iyo raraas u adeegsaday mudaharaadeyaasha, waxaana ugu yaraan ay xabbad haleeshay afar qof, sida ay xaqiijiyeen dadka deegaankaasi, laakiin lama sheegin khasaare ka dhashay mudaharaadyadii ka dhacay magaalada Jimma oo 350 km u jirta Addis Ababa.
Dhinaca kale, Ra’iisal wasaare Abiy Ahmed oo Salaasadii la hadlayey baarlamaanka ayaa waxa uu digniin u diray mulkiileyaasha warbaahinta ee qurba-joogta ah, kuwaas oo uu ku eedeeyey inay laba kaadh ciyaarayaan.
“Mulkiileyaasha warbaaahintaas oo aan haysanin baasaboorka Itoobiya, labadaba way ka ciyaaaraan. Marka ay nabad jirto, halkan ayaad ka ciyaaraysaan, marka aanu dhibaato ku jirrana, nalama joogtaan.” Ayuu yidhi Ra’iisal wasaare Abiy Ahmed.
“Waxa aanu isku dayeynaa inaanu samir muujino, laakiin haddii ay tani wax u dhimayso nabadgelyada iyo jirtaanka Itoobiya, waxa aanu qaadi doonnaa tallaabooyin, labada meeloodna kama ciyaari kartaan.” Ayuu ku daray Ra’iisal wasaaruhu.
Itoobiya: Jidka Isku-xidha Addis Ababa Iyo Bariga Dalka Oo Go’an, Gadood Lagu Taageerayo Jawhar Maxamed Oo Socda Iyo Booliska Dalka Oo Hadlay
Xog Ku Saabsan Ninka Hurdada U Diiday Abiy Ahmed Ee Jawaar Mohamed